Maxaan sameeyaa haddii U diskku uu kiciyo qaabeynta? Sida loo soo celiyo xogta diskiga U - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>>so>Maxaan sameeyaa haddii U diskku uu kiciyo qaabeynta? Sida loo soo celiyo xogta diskiga U
Maxaan sameeyaa haddii U disk-ku uu kiciyo qaabeynta? Sidee loo soo ceshan karaa xogta? Qaab-dhismeedka diskka ah ee degdegga ah, sida loo soo celiyo xogta diskiga 'disk disk'? Bplandatarecovery waa barnaamij heer sare ah oo soo kabashada kombiyuutarka. Waxay leedahay algorithm bartilmaameed u ah soo kabashada xogta U disk, oo ka helikarta xogta soo kabashada si sax ah oo dhakhso ah Xaaladaha kaladuwan ee xog luminta laxiriirta U disk. Tusaale ahaan, U disk tirtirey faylka soo kabashada, qaabka dib u soo kabashada, U disk lama furi karo, isla markiiba qaabinta, iwm waxay leeyihiin saameyn xog soo kabasho oo wanaagsan. Waxyaabaha soo socdaa waa layliyo garaaf ah oo loogu talagalay soo kabashada xogta diskka U iyadoo la adeegsanayo Bplandatarecovery. Tallaabada 1: Bog software Bplandatarecovery ah. Soo dejiso nooca ugu dambeeyay ee barnaamijyada 'Bplandatarecovery' websaydhka rasmiga ah ee Bplandatarecovery .. Ka dib markaad sifeeysay, laba-guji arjiga si aad u furato softiweerka. Waxa la sameeyo haddii U diskku kicinayo qaabeynta
Tallaabada 2: Ku xiro diskka U u baahan inuu xogta ku soo celiyo kombuyuutarka si Bplandatarecovery u aqoonsado U Disk. Haddii daaqad soo kicinta qaabeynta ay soo baxdo, si toos ah u xir adiga oo aan qaab sameynin. Tallaabada 3aad: Bogga kombiyuutarka ee Bplandatarecovery, xulo diskiga U kaas oo kicinaya qaabeynta, ka dibna riix batoonka "Soocelinta faylka". Maxaan sameeyaa haddii U diskku uu kiciyo qaabeynta
Tallaabada 4: Guji batoonka "Start" badhanka daaqadda soo-kabashada ee soo-kabashada si loo galo masraxa. Waxa la sameeyo haddii U diskku kicinayo qaabeynta
Haddii aad gujiso badhanka "Xulo Nooca Fure", daaqada soo socota ayaa soo bixi doonta. Halkan waxaad ku cayimi kartaa nooca feylasha ee iskaanka qoto dheer. Waxa la sameeyo haddii U diskku kicinayo qaabeynta
Tallaabada shanaad: dib u fiirinta xogta natiijooyinka iskaanka. Talaabadani waa mid muhiim ah maxaa yeelay feylka feylasha wuxuu gacan ka geysan karaa xaqiijinta in xogta lumay si caadi ah looga soo kaban karo. Marka hore raadi faylka aad rabto inaad soo celiso, ka dib laba jeer guji feylka si aad u furto daaqadda horudhaca ah sida ka muuqata sawirka hoose. Haddii faylka si guud loo arki karo, waxay ka dhigan tahay in faylka si caadi ah loogu soo celin karo. Waxa la sameeyo haddii U diskku kiciyay qaabeynta
Tallaabada 6: Nuqul faylasha. Ku soo koobi xogta natiijooyinka iskaanka aagagga kale si aad u dhammaystirto soo kabashada xogta. Maaddaama habka soo kabashada xogta uu yahay hawlgal aqrin-kaliya, xogta soo kabashada looma oggola in si toos ah loogu koobiyeyn karo disk-ga U. Maxaan sameeyaa haddii U diskista deg deg ah ee qaabeynta
Sidee loo hagaajiyaa qaabka loo yaqaan 'disk disk isla'? Marka dib u soo kabashada xogta U diskka ay dhamaato, waxaad isku dayi kartaa qaab kasta oo lagu dayactiro diskka U. Habka ugu fudud ayaa ah in lagu qaabeeyo nidaamka diskka U. Fur furista faylka, midig-guji warqadda wadista ee disk-ga U oo dooro ikhtiyaarka "Qaabka"; ka dibna riix batoonka "Start" badhanka daaqadda ka soo baxa. Maxaan sameeyaa haddii U diskku uu kiciyo qaabeynta
Haddii Windows aan dhammeystiri karin qaabka, waxay ka dhigan tahay in U diskku uusan qaban karin wax akhrin iyo qoris caadi ah, taas oo noqon karta Diskiga U wuxuu leeyahay waax xun, ama diskiga U ayaa la jabin karaa. Waad isticmaali kartaa softiweerka 'Bplandatarecovery' si aad u ogaato qaybaha xun ee diskiga U: Guji "Disk" menu> xulo "Xulashada Sector iyo Hagaajinta" Bad Sector and Repair ". Waxa la sameeyo haddii U diskku uu kiciyo qaabeynta
Dhagsii badhanka "Bilow Bilow" badhanka soosaarka xun ee soo-baxa iyo daaqadda dayactirka si aad u bilaawdo iskaanka sawirka U disk-ga. Maxaan sameeyaa haddii U diskku uu kiciyo qaabeynta
Muxuu U disk-ka dhaqso u sameystaa? Waa maxay sababaha caadiga ah? Halkan waxaa ku yaal soo bandhigid kooban oo ku saabsan sababta diskiga U uu si lama filaan ah u furi karin qaabka dhakhsaha leh, isagoo rajeynaya inuu kaa caawiyo inaad ka fogaato xaaladaha la midka ah. Xadhkaha aan caadiga ahayn ee korantada iyo furitaanka: ka hor inta aan kombiyuutarka USB laga qaadin kombiyuutarka, badhanka USB flash drive lama taabsiirin, ama markii la akhriyey ama qorkii USB-ga USB-ga, ayaa si lama filaan ah u go'ay. Koronto la’aanta dekeda USB oo aan xasilloonayn: Korantada aan xasilloonayn ee dekedda USB ee kombiyuutarka, koronto aan ku filnayn, koronto aan rasmi ahayn, iwm ayaa dhaawac u geysan doonta USB-ga flash flash. Waxa jira noocyo badan oo diskiyo U ah oo suuqa ah oo tayadiisu tahay mid aan sinnayn, tusaale ahaan, haddii aad si kadis ah u iibsato USB-ga USB flash, ballaarinta U disk, iwm. Sababo kale: fayras, waaxyo xun, U disk jireed, iwm. Soosoco habka kor ku xusan talaabo talaabo ah, dhibaatada ah in diskka U U aan la furi kareynin waxaa laga hadlayaa si habsami leh, waa wax aad u fudud. Waxaan rajeynayaa in asxaabteyda ay awoodi doonaan inay wax ka qabtaan nooca xaaladda mustaqbalka. Ugu dambeyntiina, tifaftiraha ayaa xasuusinaya qofkasta in xogta muhiimka ah ee U disk-ka ay tahay in dib loo soo celiyo waqtiga, taas oo naga caawin karta inaan ka fogaanno dhibaatooyin badan oo luminta xogta.
PreSida loo isticmaalo kombuyuutarrada xogta kombiyuutarka ee loogu talagalay soo celinta xogta diskiga
NextKa soo kabashada xogta guud